Apple ရဲ့Co-Founder Steve Wozniak Facebook အသုံုးပြုမှုရပ်ဆိုင်း | Than Dana
Home » News » Apple ရဲ့Co-Founder Steve Wozniak Facebook အသုံုးပြုမှုရပ်ဆိုင်း
- Updated April 10, 2018
Apple Inc. ရဲ့ Co-Founder တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Steve Wozniak ဟာ ဒီအတောအတွင်းမှာမှ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ Facebook Users တွေရဲ့ Personal Data တွေပေါက်ကြားခဲ့မှုတွေအပေါ်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အတွက် Facebook အသုံုးပြုမှုကို မနေ့ကရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒါအပြင် မနေ့က သူ့ Facebook ပေါ်မှာလည်း –
“I am in the process of leaving Facebook. It’s brought me more negatives than positives, Apple has more secure ways to share things about yourself. I can still deal with old school email and text messages.”
– ဆိုတဲ့ Post ကိုနောက်ဆုံုးတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ဒီနေ့မှာဆိုရင် သူ့ရဲ့ Facebook Account ကို Delete လုပ်လိုက်ပါပြီ။ Facebook ဟာလည်းအခုအချိန်မှာ Cambridge Analytica Data တွေပေါက်ကြားမှုနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး တရားရင်ဆိုင်မှုတွေ၊ ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီး၊ Twitter လိုမျိုး Social Media တွေမှာ #DeleteFacebook Campaign ဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့ Facebook ကိုအသုံုးမပြုကြဖို့ လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြပါပြီ။ အဲ့ဒီလို Campaign တွေကြောင့် တချို့နာမည်ကြီး နည်းပညာသမားများ YouTuber များလည်း သူတို့ရဲ့ Page ကိုဖျက်သိမ်းသွားကြပြီး၊ အခုဆိုရင် Apple ရဲ့ Co-Founder တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Steve Wozniak အပါအဝင်ပါပဲ။
Facebook ရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Mark Zuckerberg ကလည်း Cambridge Analytica Data တွေပေါက်ကြားမှုတဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ဒီတစ်ပတ်အတွင်း Washington မှာသက်သေခံဖြေရှင်းပေးသွားမယ်လို့လဲသိရပါတယ်။
Previous Post iDevices တွေမှာ Apps Notification Badges ကို ဘယ်လိုပိတ်မလဲ ?
Next Post iPhone Players များထံမှတစ်နေ့ဝင်ငွေ2သန်းရနေသော Fortnite Game
Battery Health (Beta) Function ဖြင့် သင့် iPhone Battery အခြေအနေစစ်ဆေးခြင်း
April 8, 2018 6540CommentsBy: Kyaw Hpone Naing
iOS 11.3 မှာဆိုရင် Battery Health (Beta) Function စပါဝင်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်လို Result တွေမှန်ကန်မှုသိပ်မရှိတဲ့ Third Party Apps တွေနဲ့ Battery အခြေအနေတွေစစ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။နောက် Used iPhone
သင့်ရဲ့ iPhone Battery အကုန်မြန်စေသည့် အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်
April 8, 2018 2160CommentsBy: Kyaw Hpone Naing
ကျနော်တို့ နေ့စဉ်သုံးဆွဲနေကြတဲ့ Smart Phone တွေဟာ သုံးစွဲတဲ့အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Battery ရဲ့သက်တမ်းကလည်း အသစ်တုန်းကလိုမဟုတ်တော့ပဲ Battery အကုန်မြန်တာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ပုံမန်အားဖြင့် ဒီလို Battery အကုန်မြန်တာ အားမခံတာတွေဟာ ဖုန်းရဲ့သက်တမ်း ၁ နှစ်ခွဲ